Waxay u badan tahay in badan oo dadka isticmaala Android sidoo kale laga yaabaa in ay phone Nokia ah. Haddii aad tahay mid ka mid ah, oo hadda raba inay u gudbiyaan xiriirada ka telefoonka aad Android inay Nokia ka mid ah, waxaa laga yaabaa in aad dareento yaabiyaa. Iyadoo laba nidaamyada hawlgalka kala duwan, sida aad ku dhameysan kartaa iibsiga xiriir ah? Haddii dhammaan xiriirada badbaadiyey ee SIM, waxaad kaliya gelin kara Card SIM ku saabsan Nokia. Si kastaba ha ahaatee, waxa haddii xiriirada yihiin ee xasuusta phone Android? Sida iska cad, khaanada xiriir mid ka mid ah ee aad taleefan Nokia aan hab wanaagsan yahay.
Xaaladdan oo kale, waxaan jeclahay inaan idin ​​soo bandhigo software kala iibsiga telefoonka. Waa ay Wondershare MobileTrans , inta badan loo isticmaalo inuu kaa caawiyo inaad ku wareejiso xogta u dhexeeya telefoonada iyo kiniiniyada socda Android Symbian iyo macruufka. Iyada oo ay caawimaad, waxaad ka Android inay Nokia wareejin karaan xiriirada kaliya 1 click. Ma aha oo kaliya ku wareejinaya xiriir telefoonka Android, laakiin koobi kuwa xisaabaadka, sida Google, in telefoonka Nokia ah. Ka sokow, xiriirrada guuriyeen waxaa ka buuxa macluumaad, oo ay ku jirto magaca shirkadda, magaca jagada iyo cinwaanka email.
Download software ay u guuraan xiriirada ka Android inay Nokia.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo Wondershare MobileTrans ah, aad ka phone Android wareejin karaan xiriirada si phone Nokia socda Symbian 40/60 / ^ 3.
Tallaabada 1. Orod software ku PC Windows ah
Orod software this on PC Windows marka aad salaadda dhamaysatona rakibo.
Fiiro Gaar ah: Waa in aad soo dajiyo Lugood on PC marka aad go'aansato in aad wareejiso xogta iyo ka iPhone / iPod / iPad.
Tallaabada 2. Isku aad telefoonada Android iyo Nokia in PC Windows ah
Bareesada galay fiilooyinka USB ah in ay ku xidhmaan aad telefoonada Nokia oo Android inay PC Windows Operating System socda. Ka dib markii la ogaado, telefoonka aad Android la soo bandhigi doonaa on bidix, iyo telefoonka Nokia ku yaal dhinaca midig.
By sax xogta oo cad ka hor inta nuqul , oo aad ka saari karto oo dhan xiriirada hadda telefoonka Nokia ka hor xiriir kala iibsiga.
Fiiro gaar ah: . Saxiix galay xisaabaadka ee telefoonka aad Android marka aad qorshaynayso si ay u gudbiyaan xiriirada iyaga in ay telefoon u Nokia ah
Marka aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada ka Nokia in Android , waxaad riixi kartaa Flip , iyo raacdo tallaabada xigta.
Tallaabada 3. xiriirada Nuqul ka Android inay Nokia
Hadda, bilaabaan in ay dhoofin xiriirada ka Android inay phone Nokia adigoo gujinaya Start Copy. Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax wada hadal ah, kaas oo bar horumarka aad ogsoon tahay boqolkiiba iibsiga xiriir ah. Marka iibsiga xiriir dhamaado, riix OK .
> Resource > Transfer > Transfer Xiriirada ka Android inay Nokia 1 Click